Bey'ada nololeed ee fiican waxeey ka mid tahay fa'idooyinka weeyn ee Karlsborg, degmadana waxeey ku taala dhul qurxoon oo leh dabiicad xiiso leh iyo wabiyaal badan. Degmada Karlsborg waxeey taajir ka tahay soo bandhigi kala duwan ee dhaqamada, bey'ado kala duwan ee taarikhi ah iyo goob kulan oo loogu tala galay howl dhaqan iyo xilli firaqadeed. Tani waxeey fursad uu siineeysaa aragtiyaal kala duwan inta lagu jiro sanadka oo dhan. Dad firfircoon, xiiso uu hayo hadana kuwo wax uu abuuraayo ayaa ka mid ah tayadeena nololee ee Karlsborg. Asalka ayaan ku dhiseeynaa, waxaana sii wadeeynaa hormarida adadoo degmada laga dhigaayo mid dhaqameed iyo mid howlaha xilliga firaqadeed leh.
Bogga Karlsborg waxaa ku jirto warbixin ku saabsan iyo warbixin xariir ee guri kireeyaha, ururada milkiyaasha guriyada iyo dalaalada guriyaasha.
Sido kale halkaan waxeey taajir ka tahay ururada, kuwa isboortiga iyo kuwa dhaqamada sido kalena hey'addaha kheeyriga sidii Bisha cas iyo hey'adda badbaadinta caruurta. Diiwaanka-ururada ayaad ka heli kartaa ururada ka hoowl galo meelaha aad hamiga uu heeyso.
Gaadidka dad weeynaha ayaa loo qaadan karaa Skövde oo ah meel laga qaadan karo tareemo uu socdo tusaale ahaan Göteborg iyo Stockholm. Västtrafik ayaa ka masu'ul ah gaadiidka dad weeynaha ee meesheena.
In kale oo dheeraad ah oo ku saabsan shirkadeeynta xaafadeed ka akhriso karlsborgsutveckling.se.
Vi söker fler säljare i Karlsborg Utesäljare
Lärare åk 4 - 6 Strandskolan Lärare i grundskolan, årskurs 4-6
Idrottsinstruktör , GSS / K , till Livregementets Husarer K 3 Soldat/Sjöman
Intern kommunikatör sökes i Karlsborg Informatör/Kommunikatör
Kontaktpersoner LSS Ledsagare
Vikarier till grundskolan och fritidshem Lärarassistent
Personalgeneralist till 32.underrättelsebataljonen K 3 HR-konsult/PA-konsult
Stf plutonchef 32.underrättelsebataljonen K 3 Specialistofficer
Plutonchef till underhållspluton 32.underrättelsebataljonen K3 Officer
Fritidspedagog / grundlärare till Mölltorpskolans fritidshem Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
CNC operatör CNC-operatör/FMS-operatör
Artilleriofficer / bekämpningsbefäl till S 3 / 32.Underrättelsebataljonen K 3 Specialistofficer
Flygtekniker / RPAS / TUAV till 32.Underrättelsebataljonen K 3 Specialistofficer
Livregementets husarer K 3 FJS rekryterar kvartermästare Officer
Hjälpmekaniker TUAV Soldat/Sjöman
Bevakningssoldat till Livregementets Husarer , K 3 Soldat/Sjöman
Plutonchef Underhållspluton på 32. Underrättelsebataljonen K 3 Officer
Bogga 1 ee ka mid ah 31
Skövde 40 minuter
Jönköping 60 minuter
Örebro 60 minuter
Göteborg 2,5 timmar
Stockholm 3,5 timmar